बाउ बन्दै हुनुहुन्छ ? यसरी असल पिता बन्नुहोस् सम्बन्ध – Nayabook
बाउ बन्दै हुनुहुन्छ ? यसरी असल पिता बन्नुहोस् सम्बन्ध
१. स्वस्थ रहनु अति आवश्यक : सानो छदाँ देखि नै बच्चाहरुमा स्वस्थ जीवनशैलीको बानी बसाल्न सकेको खण्डमा जीवनभर बच्चाहरुमा स्वास्थ्यको महत्वको बारेमा बुझिन्छ । यसको लागि उसलाई पिताको सहि मार्गदर्शकको आवश्यक पर्दछ । विहान चाँडै उठ्ने, योग वा मर्निङ वाक, एक्सोसाइज र खेलमा बच्चाहरुमा उत्साह जगाउनु पर्छ ।
२. केही सीमा तय गर्नुस् : आफ्ना केही कुरा स्वयं आफुलाई पनि मन परेको हुँदैन र बच्चाहरुमा यस्ता केही बानी हुन्छ जुन तपाईलाई मन परेको हुँदैन । बच्चाको बानी मन परेन भन्दैमा बच्चाहरुलाई झपार्ने वा कुट्ने गर्नु हुँदैन । केही कुरा बच्चालाई पनि तपाईंको कुरा मन परेको हुँदैन । बच्चाको पालन पोषण गर्दा यस्ता कुराको बारेमा पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ र यसको कारण खोज गर्नु पर्छ । तर यसको लागि कहिले पनि बच्चाहरुलाई जवरजस्ती गर्नु हुँदैन । जवरजस्ती गर्नाले बच्चाहरु दवावमा आउन सकिन्छ ।
३. समय दिनु : पुरुषलाई घर परिवारको साथसाथै आफ्नो विजनेस वा जागिरको पनि ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ । यस्तो बेलामा परिवारलाई समय दिन सकेको हुँदैन तर सम्भव भएसम्म बच्चाहरुलाई समय दिर्छ । हप्तामा कम्सेकम एक दिन आफ्नो छुट्टीको बेला आफ्नो केही समय बच्चाहरु लागि पनि दिनुपर्छ । समय भएको बेलामा बच्चासँग खेल्ने वा उसलाई कहि घुमाउन लिएर जानुपर्छ ।
४. बच्चाको कुरा पनि सुन्नु : हरेक चोटि बच्चालाई आफ्नो मात्र कुरा सुनाउने नगर्नुस् । यसले बच्चाहरु एकहोरो हुन पनि सक्छ । परिवारमा बच्चाहरुको आत्मीयता बढाउन कहिलेकाही उनीहरुको पनि कुरा सुन्ने गर्नुपर्छ ।
५. प्रेमको भाव सिकाउनुहोस् : माया, ममता र स्नेहले सबैको मन सजिलै जित्न सकिन्छ । बच्चाहरुको कोमल हृदयलाई जित्नको लागि जहिले पनि स्नेही भावले कुरा गर्नु पर्छ । यसले बच्चाहरु हमेशा खुशी हुन्छ र बच्चाहरुलाई यो आभाष पनि दिनुपर्छ कि तपाई उसलाई कति माया गर्नुहुन्छ भनेर । यसले बच्चा र पिता बिचको स्नेह पनि बढ्छ ।